Taariikhda My Butros » 6 Talooyin ku habboon la Meherka Smarter!
Last updated: Nov. 18 2020 | 3 min akhri
Waxaa la sheegaa runta weyn sharraxaadaha, "Jacaylku waa indha la '."
Waxa kale oo la xisaabay in sababta saabsan 50% guurka in laga xoreeyo dalka ka. dhamaan furiinka.
In kastoo Jaahil ah bixin karaan Naciimo meelo badan, qaadashada on lamaane nolosha ma aha mid ka mid ah. Waa maxay aadan aqoon u horseedi kartaa riwaayad maalmeedka, stress, caafimaad oo liita, filayo daboolin, faraxsaneyn, iyo ugu danbeyn ... goysay xiriirkii.
Laakiin waxaa war fiican.
Ma aha in aad u ciyaaro roulette xiriirka aad la mustaqbalka. Waxaa suuragal ah in qori dhammaaneysa a ku faraxsan yahay inuu sheekada jacaylka aad, haddii aad u malaynayso ka hor ka hor inta kuu Guuriyo.
Maqaalkani waa mid ujeeddo this loogu tala galay.
Qaar badan oo ka mid ah soo jeedinta iyo waxay ku xidhan wanaagsan ole 'dareen caadi ah, waayo-aragnimo iyo caqli. Qaar kalena waa edeb ee xaqiiqada show hit ah, Bridezilla.
Halkan jira dhowr waxyaalood oo aad ogtahay waa in aad ku kordhin karto Love IQ.
6 Principles iyo Practices si Meherka Smarter:
1. Aqoonso guurka aan u xaliyo wax kasta wuu jejebi doonaa.
Taasi waa xaq. Waan necbahay in uu noqdo ah "Debbie Downer" halkan; laakiin waa run. Arrimaha maamulka Anger, sharku, khamaarka, anaanimada, iyo Qabatin shopping lama wada daawayn kaliya sababtoo ah xiriirka la Qolol in xaaladda guurka. Nasiib darro, qaadashada on saaxiibkiisa a mid tahay iibsashada "sida ay tahay" gadashada. Wax kasta oo xaaladda, waxaa hadda taada. Dooro si taxadar leh si looga fogaado qoomamo iibsadaha ee.
2. In kasta oo isku lidka ah jiidan, xaas guud ee asaasiga ah waxay doorbidaan inay muddo dheer.
Qofna waa in ay guursadaan nuqul carbon isu of a. Waxa ay noqon doontaa caajis, iyo waxay bixiyaan wax yar jidka koritaanka iyo reyn-. Sidaas oo ay tahayna, waxaa jira waxyaabo labada oo idinka mid ah waa in ay wadaagaan. Tani waxaa ka mid ah lahayd gool, nidaamka qiime-aad, iyo ugu yaraan hal ama laba dano ama hiwaayad. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah meelaha dheeraad ah si ay u eegaan: Imisa kids sameeyo labada aad ee rabnaa? Aroos Big ama yar? Golaha ama guri? Hel fikrad halkan?
3. Haddii aad leedahay si aad u hubiso in ay email, jebin ku riday xisaab warbaahinta bulshada, ama wacayo telefoonka ay, "Houston ay dhibaato jirto."
Guusha kasta oo muddo dheer ah, xiriirka dhab ah waxaa u talasaarataan dhisay. Iyo sidoo kale in aad qabtid ama aadan sameyn. In kastoo dad kalana ay ku doodeen in haddii ay jiraan wax la qarinayo, inay karti u leeyihiin xad dhaaf ah inay soo xulaan xisaabaadkooda saaxiibkiisa ee waa in. Ma aha daruuri–Qofkasto wuxuu u qalmaa degree ah asturnaanta. Mar labaad, kalsoonida waa waajib! Taasi waa dabcan, haddii aan wehelkaaga leedahay taariikh la Dhoob-. Taasi waa maqaal kale mar kale.
4. "Qoto dheer Intaadan falin ka fiirso,"Judge Mablean loo isticmaalaa in had iyo jeer dhihi on iyada caan qolka TV show. Waxaa kale oo uu cashar u seynin qiimihiisu.
Ka hor inta aadan "boodaan rotem" qaataan waqti loo baahan yahay in la ogaado qofka kale. Wada-aragnimo xilli yar. Eeg sida uu isagu / iyadu u dhaqmo in times of stress, xilliyada wanaagsan iyo kuwa xun, Xanuunku iyo caafimaadka, natiijada aan fiicnayn.
5. Ka dhig mudnaanta leh ee ku aragti sax ah.
Toddobaad kasta Bridezilla ah, daawadayaasha Joogo akhyaarey smart samaynta qaar ka mid ah go'aanada halkii qosol ah. Ha mid ka mid ah in aanay noqon. Halkan tusaale. Aroosadda A Bixin doonaan $60,000 on aroos ah, inkastoo ay qabataa shaqo halkaas oo ay ka samaynta $24,000 sano ah. Lamaanahan ayaa, iyadoo ay sabab u, ay ururka u bilaabmaan dhibaato culus ee fardaha deynta ku ekaataan. Ama nool leh ee sharci-hoosaadyo ay dhowrkii sano ee ugu horeeya. Ma qabow. Ma ogtahay in mid ka mid ah sababaha ugu badan ee furiinka uu yahay dhaqaalaha? Xusuusnow in aroos waa hal maalin oo kaliya, halka guurka waxaa loogu talagalay inuu noqdo weligiis. Inkastoo ay tahay wax caadi ah aroosad in ay doonayaan in ay dareemaan sida a "amiirad" maalinta gaar ah iyada, iyadu ma bixiyaan, sida "qoyska boqortooyada."
6. Diinta Factor galay isle taataabtay.
Markuu aasaaska ruuxi ah ayaa kaa caawin kara in cimiladu ay dabeylo nolosha, iyo xoog iyo jihada xilliyada adag ku siin.
Raac lix xeerarka Cardinal guurka sanado badan Naciimo ulaa.